Vana vaBill Gates havashandise nzira yekushandisa mbatatisi ... | Linux Vakapindwa muropa
Isu takaona maringe nenhau yainongedzera kuvanakomana vaSteve Ballmer (aripo CEO weMicrosoft) vachishandisa zvigadzirwa zveApple, kukwikwidza kwababa vavo ... Asi pane imwe runyerekupe nezve mukana wekuti Bill Gates (aimbova uye muvambi weMicrosoft) akabvuma kuti vana vake vanoshandisa Linux. Isu tanzwa zvakare kuti vamwe vashandi veMicrosoft vaishandisa zvishandiso kubva kumakambani anokwikwidza, asi izvi zvakatosimba. Isu takatokwanisa kusimbisa izvozvo Microsoft yakapa kodhi kuLinux kernel.
El rumor Izvo zvakaverengerwa pamambure hazviite kuti sosi ibudirire uye hapana humbowo hwakanyatsojeka, saka isu tinofanirwa kuitora nematinji uye nekuchenjerera mune kwayo kwechokwadi. Asi kana ikasimbiswa, ingave iri nhau dzinotyisa, kunyangwe isiri itsva.
Mamwe masosi anoti Bill Gates akadaro Muhurukuro:
“Ndinonzwisisa kuti chigadzirwa chakaita seWindows chingatadze kugamuchirwa nemusika wese, uye vanhu vasina kugutsikana vanosarudza kutsvaga dzimwe nzira. Kunyangwe, ndinofanira kubvuma, kuti vana vangu vanoshandisa Ubuntu paPC avo. Asi Windows inogamuchirwa zvakanyanya mu90% yemusika, uye icho chiratidzo chekuti chigadzirwa hachina mutsigo. "
Chikamu che Mavara ekutanga zvinotevera: “Ndinonzwisisa kuti chigadzirwa chakaita seWindows hachigone kutambirwa nemusika wese, uye vanhu vasina kugutsikana vanosarudza kutsvaga dzimwe nzira. Kunyangwe ini ndinofanira kubvuma kuti vana vangu vanoshandisa Ubuntu pane ther PCs. Asi Windows ine kugamuchirwa kukuru mu90% yemusika, uye ndicho chiratidzo chekuti chigadzirwa hachina kunaka. ".
Ini ndinodzokorora, runyerekupe uye hatigone kuzvigamuchira sechokwadi. Kana ikasimbiswa, ichave iri nhau zvine mukurumbira, asi kwekanguva isu tinofanira kuzvipokana uye tigare tisina chokwadi. Ndeupi mufungo wako?
Mamwe mashoko - Microsoft Open Tech inowedzera muChina
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Runyerekupe kana chokwadi: Bill Gates vana vanoshandisa Linux!?
Senge kuti vanoshandisa OSEK, zvingave zviri mberi kuti haugone kushandisa sisitimu yekushandisa nekuti iwe uri mwanakomana waGates, izvo zvinoratidza kuti vanhu vakangwara havana maziso akavharika.
Pindura kuna 31
Ndinovimba vanoisa mitsara yekodhi muiyo kernel uye vanosiya maburi mairi senge winbug yavo uye kana zvichitaridzika kwandiri kuti vana vemasuwo vanoshandisa linuix ivo vanoziva zvakanaka
Pindura kuna bullyngafanboy
Ehezve ivo vanoshandisa yechitatu-bato software, ivo vanozviitira kuti vagadzirise yavo vega, kutsvaga mazano uye kutarisa zvinhu kubva mumaonero akasiyana.